२०७६ कार्तिक १८ सोमबार १९:१९:००
काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख एवं सांसद कृष्णबहादुर महरा अन्ततः जबरजस्ती करणी उद्योगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलाशले महरालाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार पठाउने आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशलगत्तै महरालाई थुनुवा पुर्जी दिइ डिल्लीबजार कारागार लगिएको छ ।
अदालतले सोमबार महराका पक्षका ३० बढी कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि १० पृष्ठ लामो आदेश गरेको हो ।
तीनवर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर लागेमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन सक्छ । महरामाथि लागेको जबरजस्ती करणी उद्योगमा बढीमा पाँचवर्ष र सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति भएकाले त्यसमा थप डेढी सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
प्रहरीले असोज १८ गते महरालाई सभामुख निवास बालुवाटारबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । महराले श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको भन्दै केहीदिन हिरासतमै अक्सिन लिएका थिए ।
लगत्तै उनी नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
के पुनः महरा नर्भिक फर्किएलान् ?
अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि महरा डिल्लीबजार कारागार लगिएका छन् । तर, के उनी अब डिललीबजार कारागारमै बस्लान् कि पुनः नर्भिक फर्किएलान् ? जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आनन्दराम श्रेष्ठले आदेशपछि भने, “अब कारगार व्यवस्थापन विभागको मातहतमा उहाँ हुनुहुन्छ । अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र सो विषय पर्दैन ।”
उनी पक्राउ परेपछि उनको अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बितेको थियो । अब भने अस्पताल लैजानैपरे वीर अस्पताल लगिने कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटाले जानकारी दिए ।
“हामीले बन्दीहरुलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिए सरकारी अस्पताल नै लैजाने गरेका छौं, उहाँ पनि अरु बन्दीजस्तै भएकाले अस्पताल लैजानै परेमा वीर या सरकारी अस्पताल लैजान्छौं,” उनले भने ।
अदालतको आदेशलगत्तै महरा अब डिल्लीबजार कारागारका बन्दी भएका छन् । यसअघि भने उनी स्वास्थ्यमा समस्या भएको भन्दै नर्भिक अस्पताल बसिरहेका थिए । अब भने उनलाई उपचारका लागि अस्पताल राख्नुपर्ने हो वा कारागारमै राख्ने भन्ने निर्णय कारागार व्यवस्थापन विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेछ । विभागले भने अहिले सोबारे तत्काल प्रतिक्रिया नदिने बतायो ।
असोज १२ गते राति संसद् सचिवालयमै कार्यरत रोशनी शाहीले आफूमाथि महराले बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा खबर गरेकी थिइन् । त्यहीदिन राति प्रहरीले घटनास्थलबाट रक्सीको बोतल, फुटेको चस्माको सिसा, जुत्ताको तलुवा बरामद गरेको थियो । बलात्कारको अभियोग लागेपछि महराले असोज १४ गते सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । शाहीले महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । असोज १८ गते उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
महराविरुद्ध २५ दिनपछि बिहीबार मुद्दा दर्ता भएको थियो । महरामाथि अनुसन्धानका लागि भन्दै अदालतले ३ पटक म्याद थप गर्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरामाथि अनुसन्धान गर्न पहिलो पटक १३ दिन, दोस्रोपटक पाँचदिन र तेस्रोपटक सात दिन म्याद दिएको थियो । मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारी वकिल र महरा पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि अदालतले उनलाई सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।